निपाह भाइरस नेपाल पनि आउने सक्ने, ज्यानमारा तीन फलफूल के के हो ? सावधानी अपनाउनुस् | Rajmarga
निपाह भाइरस नेपाल पनि आउने सक्ने, ज्यानमारा तीन फलफूल के के हो ? सावधानी अपनाउनुस्
भारतको केरलको कोझीकोडमा निपाह भाइरसका कारण मानिसहरुको मृत्यु भएपछि भारतभर मृत्युको आतंक छाएको छ। डब्लुएचओका अनुसार यो भाइरस निपाह भाइरस इन्फेक्टेड चमेरोको माध्यमबाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने गर्दछ ।
भारतको सरकारी हेल्थ डिपार्टमेन्टले यो खतरनाक भाइरसका कारण अलर्ट पनि जारी गरेको छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा रहेको र केरलमा हजारौ नेपाली रहेकाले नेपालीहरु नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा नेपालमा पनि आउने सम्भावना प्रवल छ। त्यसैले रोग प्रवेश गर्नुअघि नै सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यो भाइरस केही फलफूलको माध्यमबाट मानिससम्म पुग्ने गर्दछ । त्यसैले त्यस्ता फल सेवन गर्दा सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। त्यसमा पनि यो तीन फलबाट बढी खतरा रहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
भारतको मेदान्त द मेडिसिटी अस्पताल, गुडगाउँका इन्फेक्शियस डिजिज विशेषज्ञ डाक्टर नेहा गुप्ताका अनुसार छोकडा, केरा र आँपको माध्यमबाट यो भाइरस तिब्रताका साथ फैलिरहेको छ।यदि यो फल केरलबाट तपाई नजिकको बजारमा आएको छ भने निपाह भाइरसको खतरा बढी छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
साथै यदि कुनै फललाई पंक्षीले खाएको छ र त्यो तपाईले खानु भयो भने पनि निपाह भाइरस तपाईको शरीरमा फैलन सक्दछ । तपाई पनि यो भाइरस तपाईको शरीरमा प्रवेश नगरोस भन्ने चाहनु हुन्छ भने निकै सावधानी अपनाउन थाल्नुस्।
यसरी फैलन्छ निपाह
–निपाह भाइरसबाट इन्फेक्टेड चमेरो वा कुनै अरु पंक्षीले कुनै फललाई चुच्चोले ठुँगेको छ वा खाएको छ भने त्यो फलफूलमा निपाह भाइरस हुन्छ । त्यो फल कुनै पनि हुन सक्दछ।
–भाइरसवाला फलफूल बजारबाट तपाईको घरसम्म पुग्न सक्दछ । यदि तपाई त्यो तपाईले खानु भयो भने पनि तपाई निपाह भाइरसको शिकार बन्नु हुनेछ ।
–यदि कुनै सुँगुरमा यो भाइरस छ भने त्यसको माध्यमबाट पनि यो भाइरस मानिससम्म पुग्दछ ।
–यसका साथै यदि कुनै व्यक्ति यो भाइरसबाट इन्फेक्टेड छ र तपाई उसको सम्पर्कमा हुनु हुन्छ भने पनि तपाई यो भाइरसको शिकार बन्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
–कुनै पनि फलफूल सफा पानीले राम्रोसँग धोएर मात्रै सेवन गर्नुस् ।
–सुँगुर वा चमेरोबाट टाढै रहनुस्।
–विशेषगरी भारत र नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने ताडीजस्ता नशालु पदार्थबाट टाढै रहनुस् ।
–भूँइमा खसेका कुनै पनि फलफूल सेवन नगर्नुस् ।
–स्वास लिन समस्या छ, टाउको दुखेको छ वा कडा ज्वरो आएको छ भने तत्काल चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुस् । एजेन्सी
Previous post: दुर्घटनामा छोरा मरेपछि आफ्नै बाबुले उडाए छोराको गर्लफ्रेन्ड (फोटोफिचरसहित)
Next post: हट लुकमा डिनर डेटमा देखिइन् श्रीदेवीकी छोरी जाह्नवी, हेर्नुहोस् ५ फोटो
तापक्रम कम हुँदा बढी चिसो महसुुस, तामपन ३.५ डिग्री सेल्सियस
भेनेजुएला: पैसाको अभाव धान्न ढुकुटीको सुन बेच्दै